Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo lagu wado in uu booqdo maamul goboleedka Kisii – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo lagu wado in uu booqdo maamul goboleedka Kisii
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa qorsheynaya in uu booqasho 4 maalmood ah oo si aad ah loo sugayo ku tago deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Kisii.
Socdaalka 4-ta maalmood qaadanaya ee madaxweynaha uu ku aadayo gobolkaasi ayaa la filayaa in ay billaabato 9-la boshaan August oo ku beegan talaadada isbuuca dambe.
Inta uu halkaasi ku suganyahay madaxweynaha ayaa waxaa lagu wadaa in uu kulamo la yeeshop dadka deegaanka, isagoo xariga kasoo jari doona mashaariic horumarineed oo loogu tala galay maamul goboleedka Kisii.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa u soo kuur gali doona arrimaha siyaasadeed ee ka jira Countiga Kisii.
Dhanka kale, Booqashadaan ayuu Mr Kenyatta ku raadin doonaa taareego dheeraad ah oo ku aadan isbahaysiga talada haya ee Jubilee xili uu dalka kusii dhawaanayo doorashada guud ee xigta oo ku beegan bisha 8-aad ee sanadka 2017-ka.
Qorshaha madaxweynaha eek u aadan safarka uu ku aadayo Kisii ayaa yimid kadib markii dhawaan hogaamiyeyaal siyaasadeed oo laga soo doortay maamul goboleedkaasi ay madaxweyne Kenyatta ku booqdeen aqalka madaxtooyada ee magaalada tan Nairobi.
Hogaamiyeyaashaasi oo ay hor kacayeen Seneterka maamul goboleedka Kisii Chris Obure iyo ku xigeenka madaxa maamul goboleekaasi Joash Maangi ayaa madaxweynaha aqalka madaxtooyada kula kulmay maalintii khamiista ahayd ee isbuucii lasoo dhaafay.
← Dawladda Turkiga oo xirtay 11 qof oo qorsheynaayay in ay afduuban Madaxweyne Erdogan
Sarkaal ka tirsan dowlad goboleedka Machakos oo loo maxkamadeeyay kiis fara xumeyn ah →